१० वर्षे बलात्कार पीडित बालिका गर्भवती, गर्भपतनमा अदालतको रोक - Kantipath.com
नयाँ दिल्ली- भारतमा एक दश वर्षे बलात्कार पीडित बालिका गर्भवती भएको विषय भारतीय सञ्चारमाध्यममा ठूलो समाचार बनेको छ। ‘हामीले १४ देखि १५ वर्षे किशोरावस्थामा गर्भवती भएको थुप्रै घटना देखेका छौं तर १० वर्षे बालिका गर्भवती भएको घटना मैले पहिलो चोटी देखिरहेको छु,’ चण्डिगढ राज्य कानुनी सेवा प्राधिकरणका महाभिर सिंहको भनाई उद्धृत गर्दै बिबिसीले जनाएको छ।
आफ्नै आफन्तले पटक पटक बलात्कार गरेपछि गर्भवती भएकी दश वर्षे बालिकाको यस विषयले चण्डिगढ र समग्र भारतलाई नै आश्चर्य पारेको छ। यस मुद्दाको अनुसन्धानमा सिंह पनि संलग्न रहेका छन्। बलात्कारमा संलग्न आफन्त हाल कारागारमा रहेको र अदालती सुनुवाई कुरिरहेको बताइएको छ।
गर्भवती बालिका सजिलै हाँस्ने खालकी रहेकी छिन्। उनी लजालु र धेरै नबोल्ने स्वभावको रहेको भारतीय सञ्चारमाध्यमको जानकारी उद्धृत गर्दै बिबिसीले जनाएको छ। छ कक्षामा अध्ययनरत ती बालिकलाई अंग्रेजी र हिसाब अत्यन्तै राम्रो लाग्ने विषय भएको बताइएको छ। उनी चित्र बनाउन मनपराउने र उनको चित्र पनि राम्रो हुने गरेको छ। ‘उनी छोटी आनन्दी र सिन चान कार्टुन हेरेर कहिले पनि थाक्दिनन्। उनी चिकेन ,माछा र आइसक्रिम एकदमै मनपराउँछिन्,’ बिबिसीले जनाएको छ।
यी १० वर्षे बालिकको घटनामा पनि तीन साता अघि मात्रै उनले तल्लो पेट दुखेको बताएपछि उनकी आमाले अस्पतालमा चिकित्सकलाई देखाउन लगेपछि उनी गर्भवती भएको पत्ता लागेको थियो। बालिकासँग दैनिक रुपमा वार्तालप गर्ने एक व्यक्तिले उनी एकदमै निर्दोष भएको र उनलाई आफूलाई के भइरहेको छ भन्ने विषयमा पनि ज्ञान नरहेको बताए। उनका अभिभावकले पनि उनको स्वास्थ्य अवस्थाका कारण उनी गर्भवती भएको संकेत पाएका थिएनन्।
त्यसबाहेक पनि त्यति सानो उमेरमा उनीहरुका छोरी गर्भवती होलिन् भनेर उनीहरुले कल्पना समेत गरेका थिएनन्। यी १० वर्षे बालिकालाई उनी गर्भवती भएको विषयमा अझैपनि जानकारी दिइएको छैन। उनलाई उनको पेटमा ठूलो ढुंगा भएका कारण पेट दुखेको बताइएको छ।
उनलाई विशेष खानपानको व्यवस्था गरिएको छ। उनलाई अण्डा, दुध, फलफुल र कुखुरको मासुको नियमित भोजन गराइने गरेको छ र उनी आफ्नो खानपानबाट एकदमै खुशी देखिन्छिन्। तर पछिल्ला दिनमा प्रहरी, सामाजिक कार्यकर्ता र परामर्शदाता उनको घरमा निरन्तर रुपमा आउने जाने गरेका छन्। उनको घरमा सञ्चारकर्मीको पनि बाक्लो उपस्थिति हुन थालेको छ। ‘उनलाई आफ्नो अवस्था बारे ठ्याक्कै थाहा नहुन सक्छ र घटनामा भएको विकास क्रमले मलाई लाग्छ उनले पनि केही जानकारी पाएकी छिन्,’ एक उच्च भारतीय अधिकारीको भनाई उद्धृत गर्दै बिबिसीले जनाएको छ।
उनका अभिभावक आफ्नी छोरीको यस अवस्थालाई समाधान गर्न संघर्षरत रहेका छन्। एउटा कोठा भएको घरमा बस्ने गरिब परिवारका ती बालिकाको बुबाले सरकारी कार्यालय र आमाले घरेलु काममा सहयोगीका रुपमा कार्य गर्ने गरेका छन्। यस विषयमा अध्ययन गरिरहेकी प्रहरी अधिकारी प्रतिभा कुमारीले बालिकाको परिवार एकदमै राम्रो परिवार रहेको बताएकी छिन्। त्यस परिवारले आफ्नो छोरीलाई बलात्कार गर्ने त्यो मानिसले त्यस बेला के गरिरहेको छ भन्ने विषयपनि थाहा नपाएको प्रहरी अधिकारी कुमारीको भनाई उद्धृत गर्दै बिबिसीले जनाएको छ। कुमारीले ती बालिकाकी आमाले आफूसँग बोल्दा प्रत्येक पटक रोएको र बाबुले आफ्नो छोरीको हत्या भएको जस्तै लागेका बताउने गरको पनि बताइन्।
विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानले भारतमा १६ वर्ष मुनिका बालिकका प्रत्येक एक सय ५५ मिनेटमा बलात्कृत हुने गरेको देखाएको छ। त्यसैगरी भारतमै १० वर्ष मुनिका बालिका प्रत्येक १३ घण्टामा बलात्कारको शिकार हुने गरेको छ। सन् २०१५ मा भारतमा १० हजारभन्दा बढी बालिका बलात्कारको शिकार भएका थिए।
भारतका सञ्चारमाध्यमले बालिकाले राम्रो स्वास्थ्य अवस्था पाउनुपर्ने र बालिकाको परिवारले सरकारबाट आर्थिक क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने आशयका समाचार सम्प्रेषण गरिरहेका छन्। तर अनावश्यक समाचार सम्प्रेषणले बालिकाको परिवारमा समस्या ल्याएको बिबिसीले जनाएको छ। कतिपयले बालिका बलात्कारमा संलग्न व्यक्ति उनकै आमाको आफन्त भएको र छोरी सात महिनाको गर्भवती भएको विषयमा कसरी थाहा भएन भनेर प्रश्न गरिरहेका छन्।
जसका कारण बालिकाको परिवार तनाबमा रहेको बताइएको छ। बालिकाको बाबुले बलात्कार गर्ने ती व्यक्तिले कहिले पनि माफसमेत नमागेको भन्दै उसले अपराध गरेकाले मृत्युदण्डको माग गरेको बिबिसीले जनाएको छ।नागरिकबाट
Previous Previous post: बीएण्डसी अस्पतालले स्वाइन फ्लुको उपचार गर्ने
Next Next post: नेप्सेमा २ कम्पनीको शेयर सुचिकृत
बेहुला बेहुलीले तीन दिन सौचालय जान नपाउने !
‘उँट’ जसले हटाउन सक्छ तपाइँको दुर्भाग्य !
महिलाले यस्ता पुरूषसँग बढी सेक्स आनन्द लिन्छन्
बलात्कारी खोज्दै जाँदा प्रहरी भेटाइयाे दिउँसो केटा, राति केटी